Hetsika ara-kolontsaina : Hanjaka ny fifanakalozana mandritra ny Nosy Be Jazz Festival -
AccueilVaovao SamihafaHetsika ara-kolontsaina : Hanjaka ny fifanakalozana mandritra ny Nosy Be Jazz Festival
07/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Miditra amin’ny andiany faha-2. Ankoatra ny Donia sy ny Sômaroho ary nyNosy Be Symphonie, hetsika ara-kolontsaina iray tanterahina any amin’ny Nosy manitra ny « Nosy be Jazz Festival » (NBJF). Hanjaka hatrany ny fifanakalozana mandritra io hetsika izay hotanterahina ny 31 marsa ka hatramin’ny 2 avrily ho avy izao. Amin’ny maha-hetsika iraisam-pirenena azy, dia mpanakanto malagasy sy vahiny maro no hifandimby hanafana ny sehatra. Mpanakanto malagasy hitondra ny talentany amin’io hetsika io ireo mpanakanto malaza eo amin’io sehatra io any ivelany, toa an’i Solo Razafindrakoto, Lalatiana ary Aina Cook. Hanampy azy ireo anefa i Silo izay tsy zoviana amin’ny rehetra sy ireo mpanakanto tanora ao amin’ny Jazz Club ao amin’ny Cercle Germano Malagasy (CGM).
Mpanakanto vahiny maromaro ihany koa no hanolotra seho miavaka mandritra ny NBJF, ka anisan’ireny ilay teratany frantsay Lionel Belmando, Laurent Fickelson, Pierre-Alain Goualch, ilay teratany belza David linx, ilay amerikana Kyle Allen…
Ankoatra ny fampisehoana, dia hanamarika ity hetsika ho an’ny Jazz any Nosy Be ity ihany koa ny tontolon’ny fampianarana sy fifanakalozana traikefa momba ny jazz sy ny fiarahana tsy ampoizina eo amin’ireo samy mpitendry.
Dingana hafa amin’ity andiany faharoa amin’ny NBJF ity ihany koa ny fiaraha-miombon’antoka amin’ireo hetsika iraisam-pirenena hafa momba ny jazz, ka anisan’izany ny fiaraha-miasa amin’ny « Bar-in-Jazz » atao any Atsimon’i Italia. Mandritra ny hetsika dia hisy ny fiarahana mpanakanto hiforona ho tarika iray ka handrafitra izany i Silo, Tsanta Randriamihajasoa, ilay Italiana Gianno Lenoci, ary ilay palestiniana Nabyl Bey. Izy ireo dia handray anjara amin’ny hetsika any Italia io ny volana jona sy jolay 2018.
Miara-dia amin’io hetsika io, dia misy ihany koa ny fanasongadinana ny resaka fizahan-tany ataon’ny mpikarakara. Misy rahateo ny tolotra manokana ho amin’izany.